AwePSL asadukuza ontwini ngeyesibonelelo - Bayede News
Sibungaza uMzala Nxumalo
Phezu kokuthi sekuphele izinyanga ezinhlanu kwamenyezelwa ukuthi amaqembu ePremier Soccer League (PSL) azokwenyuselwa imali yesibonelelo, sekuvele ukuthi namanje amakilabhu asakhangezile. NgoNcwaba nyakenye iPSL yamemezela ngemuva komhlangano wesigungu seBoard of Governors, lapho kuhlala khona abaphathi bamakilabhu awu-32 ePremiership naweNational First Division (NFD), ukuthi ihanjelwe kahle izinto ngasezimalini njengoba ngokwesizini yezi-2018/19, amabhuku abacwaningi bezimali zayo aveza ukuthi yenze inzuzo yesigidi samarandi. Lokhu kwaba ingqophamlando emlandweni wePSL eyenza inzuzo ngemali eyithola ngoxhaso lwabakwaSuperSport International abasakaza imidlalo kanti inoxhaxha lwabaxhasi abanjengo-Absa, iTelkom, iMTN neNedbank abafake imali emiqhudelwaneni yemikhumulajezi. Kungakapholi maseko iPSL yamemezela ukuthi iNFD isizobizwa ngeGladAfrica Championship njengoba abaxhasi abasha bengene emshadweni weminyaka emihlanu nayo.
Kwathiwa abazodla umhlanganiso kulesi sigaba esinamaqembu ayili-16 bazogoduka nesheke lezigidi ezi-3, ozolala endaweni yesibili uzothola izigidi ezi-1,5 bese kuthi ozolala endaweni yesithathu anikwe isigidi. Esithangamini nabezindaba uSihlalo wePSL, uDkt u-Irvin Khoza, wathi ngenxa yokuhamba kahle ngasezimalini, nemali yesibonelelo emaqenjini ePremiership neNFD izokwenyuka, kodwa wangaphumela obala ukuthi izothasiselwa kangakanani. Amaqembu adlala kuPremiership okwamanje athola izigidi ezi-2 kanti aweGladAfrica Championship wona anikwa izi-R500 000. Kwaba nethemba emaqenjini aku- GladAfrica Championship ukuthi ingcindezi yezindleko zokuphatha amaqembu isizokwehla. Sekuphele iminyaka amaqembu adlala kulesi sigaba ekhala ngokudonsa ngodizili njengoba lesi sigaba akuso sithathiswa okwentandane engenabani lapho abanye abakwiPremiership kubahambela kahle. Ngokuthola kweBAYEDE, ehletshelwe izikhulu zamaqembu amabili agijima kuPremiership namabili ayibambe kuGladAfrica Championship, akukho mali yesibonelelo esangeziwe.
Lezi zikhulu zidonse ngendlebe izintatheli zelaboHlanga ukuthi zingadalulwa amagama ngoba zesaba ukuthi zingabukwa njengabantu abakhiphela emphakathini izindaba zaseParktown, enhlokohhovisi lePSL eGoli. “Sajabula safa ngesikhathi iligi imemezela ukuthi yenze isigidigidi kwaphinde kwafika abaxhasi beNFD. Angeke ukholwe ukuthi ngikhuluma nawe nje, sifana namaphuphu ezinyoni alambile akhamisele ukufunzwa. Sizwe ngomoya ukuthi kungenzeka sithole izi-R800 000, kodwa asazi sesilinde bona bese nathi siyapatanisa sibheke phambili,” kusho lesi sikhulu. Esinye isikhulu sinanele ngokuthi: “Kusacwebe iziziba ngasohlangothini lwami kanti ngike ngezwa ngomunye uzakwethu ethi naye kusathule. Angiqondi kahle ukuthi yini edale ukuthi kuhambe ngonyawo lonwabu.
Abantu abaqondi ukuthi ukuphatha iqembu elikuNFD kuyizindleko kwazise asinabo abaxhasi njengamaqembu akuPremiership. Kulesi sibonelo sezi-R500 000 umuntu kumele ancozule imiholo, ukukhokhela iclub house nokubhukha amabhanoyi uma siyodlala ekuhambeni.” Esinye isikhulu sithe asazi ukuthi noma ukudonsa izinyawo kwePSL ukubanyusela imali ingoba kuputshuke izindaba zokuthi abaxhasi abakhulu bePSL bazophuma emshadweni eminyakeni emibili esiya kuyo. Leli bhange njalo ngonyaka lifaka izigidi ezili-100. Kuzo ezePSL, kukhonjwa uJose Ferreira ekuthatheni isikhundla sokuba iSikhulu Esiphezulu ngokuphelele engena endaweni kaMato Madlala, okunokukhala okukhulu ngaye njengoba enguSihlalo weLamontville Golden Arrows. Sekuphele iminyaka emithathu uMato ebambile kulesi sihlalo kanti imvunge ayipheli kubantu ngokuthi kumele kutholakale umuntu ongenakilabhu. UFerreira, owesule kuBidvest Wits njengeSikhulu Esiphezulu ngoMandulo, uwuqweqwe ekuphathweni kwebhola njengoba amava akhe wawakhombisa esangumshushisi wePSL.
Uqale ukuba ibamba leSikhulu Esiphezulu kuMamelodi Sundowns kusukela ngowezi-2004 kuya kowezi-2007 lapho anqoba khona izicoco zeligi. Uqhubekile nokugila izimanga enza lo msebenzi kuSuperSport United enqoba izicoco zeligi nomqeqeshi uGavin Hunt maphakathi kowezi-2008 nowezi-2010. Nguye futhi uFerreira oqede indlala yezicoco esesebenza noHunt kuBivest Wits ngesizini yezi-2016/17 ikhala yemuka nesicoco seligi neseMTN8. Kuthiwa uKhoza umkhonzile futhi ubona ezokwenza umsebenzi oncomekayo ngenxa yobuhlakani anabo. Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela iPSL ingabuyelanga kuleli phephandaba nakuba yayithunyelelwe imibuzo ngoLwesibili.
nguSabelo Maphumulo Feb 1, 2020